မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: August 2011
အရှေ့အရပ်ဘက်သို့ လည်းကောင်း၊ အနောက်အရပ်ဘက်သို့ လည်းကောင်း
မျက်နှာမူခြင်းသည် အသင်တို့ အဖို့ကောင်းမြတ်သော အကျင့်သီလ မဟုတ်သေးပေ ။
ကောင်းမြတ်သော သီလရှိသူ(သီလဝန် ဂုဏဝန်) ဟူသည်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို၎င်း၊ နောက်ဆုံးနေ့ ကို၎င်း၊ ကောင်းကင်တမန်များကို၎င်း၊ ကျန်းဂန်များကို ၎င်း၊ နဗီတမန်တော်များကို၎င်း ယုံကြည်မြတ်နိူးသော သူများပင်တည်း ။
၎င်းပြင် ယင်းသူတို့ သည် မိမိတို့ ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများကို စုံမက်နှစ်သက်ပါလျက်နှင့်ပင် ဆွေမျိုးညာတကာများအား၎င်း၊ မိသက်ဆိုး ဘသက်ဆိုးများအား၎င်း၊ သူဖုန်းစားများအား၎င်း၊ ကျေးကျွန်များကိုကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်စေရာတွင်၎င်း
ထို့ ပြင်ယင်းသူတို့ သည် ဆွလားတ် ဝတ်ပြုကြ၏ ။
ဇကားသ် ဒါနကြေးကိုလည်း ပေးလှူကြ၏ ။
တစ်ဖန် ယင်းသူတို့ သည် ကတိပြုသောအခါတွင် မိမိတို့ ၏ ပဋိညာဉ် ကတိခံဝန်ချက်များကို အတည်ပြုကြ၏ ။ ဆင်းရဲဒုက္ခ ကျရောက်သည့် အခါတွင်၎င်း၊ ရောဂါဘယ ဖိစီးသည့်အခါတွင်၎င်း ၊ စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်သည့် အခါတွင်၎င်း သည်းခံခြင်း ခန္တီစပါရမီ ကို ခိုင်ခန့် စွာ စောင့်စည်းကြ၏ ။
ထိုတရားလမ်းစဉ် များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသော သူမွန်သူမြတ်တို့ သည်သာလျှင်သစ္စာဝါဒီများ ဖြစ်ကြကုန်၏ ။ ထိုသူမွန်သူမြတ်များ သာလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်ကို ကြောက်ရွံ့ ရိုသေ မြတ်နိူးသော သီလဝန် ဂုဏဝန် များ ဖြစ်ကြကုန်၏ ။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်း(2း 177 )
ပို့စ်တင်သူ IYS ဝိုင်းတော်သား Ko Zaw Zaw အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 2:17 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 1:19 AM No comments:
အကြင်သူသည် အောက်ပါတောင်းဆုတော်အား နေ့စဉ်များစွာရွတ်ဖတ်လျှင် ဒီန်းသာသနာအပေါ် တည်တံ့နိုင်စွမ်းရရှိပြီး မြင့်မြတ်သောသေခြင်းတရားရရှိမည်။ ( မစ်ရ်ှကားသ်)
“ ယာဟိုင်ယု ယာကိုင်ယူမု ဗိရဟ်မသိက အပ်စ်သဂီဆု”
အကြင်သူသည် အောက်ပါဒိုအာကို ရွတ်ဖတ်ပြီး လိုအပ်သမျှကို တောင်းခံပါက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဧကန်မုချ ၄င်း၏တောင်းဆိုမှုများကို လက်ခံပါလိမ့်မည်။ (သစ်ရ်မီဇီ)
“ လာအိလာဟ အစ်လ္လာအန်းသ စွဗ်ဟာနက အင်န္နီကွန်းသု မိနပ်ဇ်ဇွာလေမီးန်”
အကြင်သူသည် အောက်ပါတောင်းဆုတော်ကို ရွတ်ဖတ်နေလေ့ရှိသော် ဟဂ်ျနှင့် မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံး
“ လာအိလာဟ အစ်လ္လလ္လာဟွလ် ဖသ်သာဟွလ် အလီမွလ် ကရီဗွလ် မန္နားန်”
အကြင်သူသည် အောက်ပါကလေမာဟ်တော်အား နေ့စဉ်ကြိမ်ဖန်များစွာ ရွတ်ဆိုနေလေ့ရှိသော် လောကီနှင့်တမလွန်ဆိုင်ရာ ရောဂါပေါင်း(၉၉)ပါး၏ ဆေးသဖွယ်ဖြစ်မည်။(မစ်ရ်ှကာသ်ကျမ်း)
“လာဟောင်လ ၀လာကုဝသ အစ်လ္လာဗစ်လ္လာဟ်”
အကြင်သူသည် အောက်ပါဒိုအာကို နမာဇ်ဝတ်ပြုပြီးတိုင်း အလေ့အထပြု ဖတ်ရွတ်လေ့ရှိသော် အင်ရှာအလ္လာဟ် အီမာန်နှင့်တကွ ကွယ်လွန်နိုင်ပေမည်။
“ရဗ္ဗနာ လာသုဇစ်ဂ် ကုလူဗနာ ဗအ်ဒ အစ်ဇ်ဟဒိုင်သနာ ၀ဟဗ်လနာ မိလ်လ္လဒွန်က ရဟ်မသာန် အင်န္နက အန်းသလ်ဝဟ်ဟာဗ်”
အောက်ပါတောင်းဆုတော်အား ဖရဇ်သ်ဆွလာသ် ၀တ်ပြုပြီးတိုင်း (၇)ကြိမ်စီရွတ်ဖတ်ခဲ့သော် အင်ရှာအလ္လာဟ် အလ္လာအရှင်မြတ်သည် ထိုသူ့အား ဂျဟန္နမ်ငရဲမှ လွတ်ကင်းစေတော်မူမည်။
“ အလ္လာဟွမ္မ အဂျီရ်နီ မိနန်းနာရ်”
ပို့စ်တင်သူ IYS ဝိုင်းတော်သား Sister Jasmine Shafee အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 11:14 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 9:55 PM No comments:
For KL. Malaysia
For Jeddah, Saudi Arabai For Göteborg, Sweden
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group.
Posted by Ordinary person at 12:07 AM No comments:
အိဗာဒသ်သည် အရဘီစကားဖြစ်၏။ ကျိုးနွံနာခံသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မကောင်းမှု ရှောင်သော ကောင်းမှု ဆောင်သော ကျင့်မှုချက် အားလုံးတို့သည် အစ္စလာမ့် အယူအဆအရ
အိဗာဒသ် ဖြစ်သည်။ ဥပမာဆိုရသော် ညစ်ညမ်းသော စကား၊ များမှ ရှောင်ရှားခြင်း၊ မုသား
...ဆိုခြင်း၊ အငြိုးထား ခြင်း၊မနာလိုဝန်တိုခြင်း ၊သေရည်သေရက် သောက်စားခြင်း၊ တရားမ
၀င် ကာမကျူးလွန်ခြင်း ၊ မိဘအား မခြေမငံ့ပြောခြင်း စသည့် မကောင်းမှု များကို
ရှောင်ရှား ခြင်းသည် လည်း အိဗာဒသ် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မိဘမဲ့များ နွမ်းပါးသူ များ
အား စောင့်ရှောက်ပေး ကမ်းခြင်း၊ မိဘ အားပြုစု လုပ်ကျွေးခြင်း၊ တရား သဖြင့်
စီးပွားရှာဖွေခြင်း၊ အစ္စလာမ့်အကျိုးအတွက် ပညာ ဆည်းပူးခြင်း အိမ် ထောင်ပြုခြင်း
စသည့် ကောင်းမှု အဖုံဖုံ ဆောင်ရွက်ခြင်း သည်လည်း အိဗာဒသ် ဖြစ် သည်။
လောကီဆန်သည်ဟုထင်မှတ်ထားသော လမ်းပေါ် ရှိ ဆူးညှောက်ခလုပ် များ ဖယ်ရှားခြင်း၊
လမ်း ပျောက် သူကို လမ်းရှာ ပေးခြင်း၊ ဇနီးသည်နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံခြင်း ၊
အပြုံချိုချို ထားရှိခြင်း၊ တို့သည်လည်း အိဗာဒသ် များဖြစ်ကြသည်။
ချုပ်၍ဆိုရလျှင် ပြုမူချက်တိုင်းပြုမူချက်တိုင်း​၌ အလ္လဟ် အရှင်မြတ်
နှစ်သက်သဘောတူ ရန် ရည်ရွယ် ၍ အစ္စလာမ့် စနစ်ဇယား အတိုင်း ကျင့်သုံးနေထိုင်
သွားခြင်း ကို အိဗာဒသ် ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။၃
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအားံ အစ္စလာမ့်စနစ်ဇယားနှင့် အညီ ပြုမူနေထိုင်နိုင် ရန်အတွက်
အလ္လဟ် အရှင်မြတ်က ဆွလာဟ် ၊ဆွီယာမ်၊ ဇကားသ်၊ ဟဂ်ျ တို့ကို မပြုမနေရတာဝန် ပင်မ
အိဗာဒသ် အဖြစ် သတ်မှတ်ထား ပါ သည်။ မွတ်စလင်များ နေ့စဉ် ၀တ်ပြု ရသော ငါးကြိမ်
ဆွလာသ် တာဝန် ပြီး နောက်တွင် တစ်နှစ်တွင် ရမသွာန်လကျရောက်တိုင်း ဆွီယာမ် ဥပုသ်
သီလ စောင့် ထိန်း ကြရ သည်။ ရမသွာန်လမြတ် တွင် အာရုဏ်ဦး အစပြုကာ နေ၀င်ချိန် ထိ
တိုင် အစားအသောက် ၊လိင်မှုကိစ္စ မှ ရှောင်ရှား ရပါသည်။ မည်မျှပင် ဆာလောင် မွတ်သိပ
်နေပါစေ ၊မည်မျှပင် စိတ်ပြင်းပြနေပါစေ ထမင်းတလုပ်၊ ရေတစ်စက် ပင်ပါးစပ်ထဲသို့
ထည့်သွင်း ခွင့် မရှိချေ။ အာရုံနစ်မူး စေသည့် အခြင်း အရာ များကို
လုပ်ခွင့်မရှိချေ။ ဤသို့သော စည်းကမ်း ချက် များစွာနှင့် သတ်မှတ်ထားသော မြတ်
ဆွီယာမ် ဥပုသ်ကို တင်းပြည့် စောင့်ထိန်းနိုင် ရေးမှာ အခြားသူများ၏
အမြင်အရဆိုလျှင် အတော်ပင် ခက် ခဲ လှသော ကျင့်ကြံမှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ငြား
သန်းရာချီသော မွတ်စလင်တိုသည့် ဤမျှ ခက်ခဲ ပင်ပန်းသော တာဝန်တစ်ရပ်ကို အ လွယ် တကူ
လိုလိုလားလား နှင့် ကျင့်သုံး လိုက်နာ နိုင်ကြ ပါ သည်။ ဤသို့ စွမ်းဆောင်နိုင်
သည်မှာ အဘယ်ကြောင့် ပါနည်း ။ စေ့စေ့တွေးကြည့် မည်ဆိုလျှင် သောင် ဟီဒ် ဆိုသော
အလ္လဟ် အရှင်မြတ် တစ်ပါးတည်းကိုသာ ယုံကြည်မှု ကြောင့် ဟုသာ အဖြေရ ပါသည်။
ရမသွာန်တစ်လလုံး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့် အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ရာခြင်းဖြင့်
တစ်နှစ် ပတ်လုံး အလ္လဟ်အရှင်မြတ် လိုလာသော ဘ၀နေဟန်ကို အလွယ်တကူကျင့်သုံး
နိုင်မှာဖြစ် ပါသည်။ ရှေ့တန်း မထွက်ခင် စခန်းသွင်း လေ့ကျင့် သင်တန်း တက်ခြင်း
ဟု နာလည်းမိပါသည်။ သို့မှသာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်း လှ သော လူဘ၀၏ စိန်ခေါ်ချက် အထွေထွေ
ကို အစ္စလာမ်စနစ်ဇယားဖြင့် ကျော် လွှာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်ချင်း စာတက်ခြင်း၊ အချိန်လေး စား တက်ခြင်း၊
နိုးကြားတက်ကြွခြင်း၊ ညီအရင်း အစ်ကိုစိတ်ဓါတ်၊ ခန္တီးတရား၊ နှင့်အမိန့်နာခံ
တက်ခြင်း စသည့် ဘ၀တန်ဖိုးများ ကို ရမသွာန်က တပြိုင်နက် တည်း ပေးစွမ်းနိုင်
ပါသည်။ အထူးသဖြင့်မ ညီမျှမှုများ ထူပြောရာ ကမ္ဘာကြီးတွင် အလွန်းအမင်း တောင်းတ
နေသည့်် သာတူညီမျှခြင်း သဘောကို ဤရမသွာန်က ဆောင်ကြဉ်း ပေးပါသည်။
*အို မုအ်မင်န် ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ အလ္လဟ်အရှင်မြတ် သည် အသင် တို့ထက် အလျှင်
ရှိခဲ့ကြသော သူတို့အပေါ်ဝယ် ဥပုသ်သီးတင်း ဆောက်တည်ရန် ပညတ်တော် မူသကဲ့သို့ပင်
အသင်တို့အပေါ်၌ လည်း ဥပုသ်သီးတင်း ဆောက်တည်ရန် အမိန့်တော် ကို ပြဌာန်း အတည်ပြု
မူခဲ့လေပြီ။သို့(ဥပုသ် သီးတင်း ဆောက်တည် )မှသာ အသင်တို့သည် ပြစ်မှု ဒုစရိုက်
တို့မှ ကြဉ်ရှောင် သူများဖြစ်တန်ရာ၏။ကုရ်အာန်ကျမ်း​မြတ် ၂း၁၈၃၁ ၁
ရှေးယခင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် မှာ ဆွီယာမ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အမိန့်တာဝန်
ပေးခဲ့ကြောင်း အခြားသော ဘာသာတရားများ၏ ဥပုသ်သီလ က အပြစ်ကြွေးများ အတွက်
ပေးဆပ်ဖြစ်သော်လည်း မွတ်စလင်များအတွက် မူ ဆွီယာမ် ဥပုသ်သီလ သည် သက္က၀ါ
ဖွံဖြိုးစေ ရန် ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ အာယသ်တော်မှာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အလ္လဟ်အရှင်မြတ်
အပေါ်ထားရှိသည့် သက္က၀ါ ဆိုသော အလ္လဟ်အရှင်မြတ် အား သိစိတ်ဖြင့် ကြောက် ချစ်စိတ် က
မွန်မြတ် ကောင်း မွန်သော လုပ်ရပ် များကို ကျင့်ကြံတက်ခြင်း ၊ မကောင်းမှု
အထွေထွေးကို ရှောင်ကြဉ် တက်ခြင်း စသော အရည်အသွေး များကို ဖြစ်ထွန်း လာစေပါသည်။
ကောင်းမြတ်သောပြုမူ ဆောက်တည်ရေးတွင် လက်မနှေးကြသော ဆွဟာဗာ သာဝကတော်ကြီး များ က
ကောင်းမှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည်က အကောင်း ဆုံး ကျင့်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသနည်းဟု
တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ထံ မေး လျှောက် ကြသည်။ ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်ကြီး က
ဆွီယာမ် ဥပုသ်သီလ ဆောက် တည်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းဆွီယာမ် နှင့် တူညီသော
အရာမရှိ ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။(နစာအီ)၂
မွတ်စလင် တို့အား ဖရဇ်တာဝန်အဖြစ် ပြဌာန်းထား သော ဆွီယာမ်ဥပုသ် တွင် လည်း
အထပ်ထပ် နှောင်ပိုး ထားသော အလွှာများရှိပါသည်။ ဆွီယာမ်၏ ၀ိသေ သ လက္ခဏာထူးကို
၄) စိတ်ခံစားမှု အလွှာ
၅) စိတ္တ အလွှာ
၆) နာမ်ဝိဥာဏ် အလွှာ များရှိကြသည်။ ၄
ဤ အလွှာ ၆လွှာ တို့သည် အလ္လဟ်အရှင်မြတ် လက်ခံတော်မူသည့် ဆွီယာမ် ၌ ပါရှိသော
၀ိသေထူး များဖြစ်ကြ သည်။ ဆွီယာမ်၏ အနှစ်သာရကို ဤအ လွှာ ၆ခု ကဖေါ်ကျူးနေပါသည်။
ဤအလွှာ၌ ဆွီယာမ် တာဝန်ကျေပွန်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော အခြေခံ စည်းမျဉ်း
များဖြစ် သော မိုးသောက်ချိန်မှ နေ၀င်ချိန်အကြားတွင် အစား အသောက်ရှောင
်ကြဉ်ခြင်း၊ လိင်မှု ကိစ္စ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း နှင့် တစ်နှစ်တွင် ၁လ ရမသွာန် လ
ဆွီယာမ်ဥပုသ် စောင့်ထိန်း ခြင်း တို့ ပါဝင် သည်။ ဆွီယာမ်၏ မြင့်မားသော
နာမ်ပိုင်းဟန် အနှစ်သာရ များ ပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ အစ္စလာမ့် ဥပဒေအရ သတ်မှတ် ထားသော
ဆွီယာမ် ဆောက်တည်ခြင်း အထမြောက်နိုင်ရန် နယ်နမိတ် မျဉ်းဆန်ဆန်
စည်းကမ်းချက်များဖြင့် သတ် မှတ်ထားသည်။ အခြားသော ဆွီယာမ် အလွှာများ
နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း မရှိပဲ ထုံးတမ်းနည်းနာအရ သတ်မှတ်ထားသော ဆွီယာမ်
့ကိုသာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူသည် အလ္လဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော် တစ်ခု ကို
ကျေပွန်သည်မှတပါး ဥာဏ်စင် ဖွံဖြိုးမှုများ ရရှိမည်မ ဟုတ်ချေ။
ဆွီယာမ်၏ ရုပ်ကာယအဆင့် တွင် ဆွီယာမ်စောင့်ထိန်းသူက တမန်တော်မြတ်ကြီး ၏ စွန္နဟ်
အတိုင်း ဆောက်တည်မည် ဆိုလျှင် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း ၊ ရေငတ် မွတ်ခြင်း
များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)သည် ဆဲဟ်ရီ ချိန်တွင် အနည်းငယ်မျှသော
အစာကို သာ သုံးဆောင် လေ့ ရှိပြီး အိဖ်တာရ် တွင်လည်း အစာအိမ်ပြည့်တင်းအောင်
စားသုံးတော်မမူချေ။ တမန်တော်မြတ် က ဗိုက်ပြည့် တင်း အောင်စားသုံးခြင်ကို
မနှစ်သက် ကြောင်း၊ အစာအိမ်၏ သုံးပုံ အနက် တစ်ပုံကို အစာ အတွက်၊ တစ်ပုံကို
ရေအတွက် ၊ ထားရှိရန် မိန့်ဆိုထား သည်။ (အိဗနေမာဂျဟ်)၂
တမန်တော်မြတ် ကြီးသည် စွန်ပလွံသီးအခြောက် အနည်းငယ် ၊ရေ တခွက်ဖြင့်
မဂ်ရီဘ်ဆွလာသ် မတိုင်မီ အိဖ်တာရ် လုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ဆွီယာမ် စောင့်ထိန်း သူ အား
ဆာလောင်မွတ် သိပ်ခြင်း ၊ရေငတ်မွတ်ခြင်း ကိုခံစားစေခြင်းဖြင့် အငတ်ဘေး နှင့်
ရင်ဆိုင်နေရသော သန်းပေါင်းများ စွာသော ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ အပေါ် ကို
ကိုယ်ချင်းစာ စိတ် ကို ဤအလွှာက ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။
အချို့ သူတို့ သည် အိဖ်တာ၊ ဆဲဟ်ရီ အချိန် တို့တွင် မို့မို့မောက်မောက်
သုံးဆောင် သည်။ သို့ဖြင့် ၄င်းသူ၏ ဆွီယာမ်သည် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လှ သည်။
ရမသွာန် တစ်လလုံး၌ မည်သို့သော ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု ကိုမျှ မခံစားရ၍ ဤရုပ်ကာယ
အလွှာက ပေးသော ဆွီယာမ် အနှစ်သာရကို မရရှိကြ ပေ။ ထို့ပြင် ဆွီယာမ်၏ အခြားသော
အလွှာများသို့လည်း မတက်လှမ်းကြ သဖြင့် သူတို့ ၏ ဆွီ ယာမ်ဥပုသ်သည်
အစာငတ်ခံနေခြင်း ထက်မပိုတော့ပေ။ဤ အချက်ကို တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) က
၄င်းသူတို့၏ ဆွီယာမ် သည် ဆာ လောင်ခြင်း ရေငတ်ခြင်းများခံစားရရုံ မှတပါး အခြား
အရာ များရရှိ မည်မဟုတ်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ ပါသည်။ (အိဗနိမာဂျဟ်)၂
ဤအလွှာက လိင်အာရုံနှင့် ကာမဆန္ဒ တို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကို ထပ်ဟပ်ပါ သည်။
လိင်ဆွဲဆောင်မှုများ နှင့်ပြည် နှက်နေသော အဆက်မပြတ် လှုံ့ဆော် လျက်နေသော
မီဒီယာများ၊ ပတ်ဝန်ကျင် အ သိုင်း အ၀ိုင်း များ အလယ်တွင် ကာမ စိတ်ရိုင်းအား
ချုပ်တည်းနိုင်ရေး တွင် ဤအလွှာက အထိ ရောက် ဆုံး စွမ်း ဆောင်နိုင်ပါ သည်။
ဆွီယာမ်က လိင်စိတ် ဆန္ဒကို လျော့ကျစေသဖြင့် စိတ်ရိုင်း အား နိုးကြွစေ သော
မည်သည့် လှုံ့ဆော် ကိုမဆို ဆွီယာမ်စောင့်ထိန်းသူ က အလွယ်တကူ ရှောင်တိမ်းနိုင်
ပါသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)က မျက်လုံး ၊ အင်္ဂါများ ဟရာမ်အမှု မှ ရှောင်ရှား
နိုင်ရေးအတွက် လက်ထပ် ထိမ်းမြား နိုင်စွမ်းရှိပါ က လက်ထပ်ကြရန်
တိုက်တွန်းထားပြီး အကယ်၍ မတက်စွမ်း ပါက ဒိုင်းသ ဖွယ်ဖြစ်သော ဆွီယာမ်ဥပုသ်သီလ
ကို စောင့်ထိန်ကြရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (ဗုခါရီ)၂
ဖဂျရ်မတိုင်ခင်ချိန် ကာလမှ မဂ်ရိဘ်အချိန် အကြားကာလ (ဆွီယာမ် စောင့်ထိန်းချိန် )
အတွင်းလိင်မှု ရေးရာ မှရှောင်ရှား နိုင်ခြင်းဖြင့် ဟရာမ် တရားမ၀င်သော
လိင်မှုကိစ္စ များ ရှောင်ရှားရန် ပို၍ ပင် လွယ် ကူလာ ပေသည်။
လူ့စိတ်နှလုံးနှင့်ရူဟ် ၀ိဥာဏ်တို့ အပေါ် ညှိုးနွမ်းစေသော ဒေါသ မောဟ စသည့်
စိတ်ခံစားချက်များ အား ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ဤအလွှာက ဖေါ်ဆောင် ပါသည်။ ဆွီယာမ်ဥပုသ်
သည် ဆိုးဝါးသော စိတ်ခံစား ချက်များ ကနေ ကင်းဝေး စေပါ သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး
မုဟမ္မဒ်(ဆွ)က ဆွီယာမ်စောင့်ထိန်းပါက အလဟဿအချည်းအနှီး လုပ်ရပ်၊
စကားပြောဆိုခြင်း များ ကနေရှောင်ရှား သင့်ကြောင်း၊ အကယ်၍ တစ်ဦး တစ်ယောက် က
စက်ဆုတ်ဖွယ် ကောင်းသော စကား ပြောဆို ဆွေးနွေး လာပါက “ကျွန်တော် ဆွီယာမ် ဥပုသ်
စောင့်ထိန်းထားသည် ”ဟု ၄င်း အား တုန့်ပြန်ပြော သင့်ကြောင်း
မိန်မှာခဲ့သည်။(ဗုခါရီ)၂ ထို့ကြောင့် ဆွီယာမ် စောင့်ထိန်း သူအား အကျိုး
ယုတ်စေသော မနာလိုဝန်တိုခြင်း၊ မာန ထောင် လွှာခြင်း ၊ကြွားဝါတက်ခြင်၊ စကားပြော
ဆိုကြမ်း တမ်းခြင်း ၊ ဒေါသ ထွက်ခြင်း၊ စိတ် ရှုပ် ထွေးခြင်းစသော မရှိသင့်
မရှိအပ်သော စိတ်ခံစားချက် များ ဤအလွှာ က ရှောင် လွဲပေး ပါသည်။
ဆွီယာမ်စောင့်ထိန်းသူ အနေဖြင့် ရှိုင်တွာန် လိုလားသော လောဘစိတ် စေးနှဲ တွန့်တို
စိတ်စသော စိတ်ရိုင်းများအား ကျော်လွှား ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် နည်း လမ်းများ ကို
ဤအလွှာက လမ်းပြပေးသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး မုဟမ္မဒ်(ဆွ) က မိန်တော်မူခဲ့သည်။
အလ္လဟ်အရှင်မြတ်သည် ဆွီယာမ် စောင့် ထိန်း စဉ်အတွင်း ၌ပင် လိမ်လည်မုသာပြောခြင်း၊
လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို မရှောင်တိမ်းနိုင် သူတစ် ဦး ၏ ဆွီယာမ်ကြောင့် ခံစားရသော
ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းတို့ကို အလ္လဟ်အရှင်မြတ် အလိုရှိ
တတိုင်းရ ဖြစ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်း၌ လိုအပ်ချက် ဆန္ဒများ ပေါ်ထွန်း လာသည့်
အခါတိုင်း ချက်ခြင်း နီးပါးပင် မိမိတို့ ဖြည့်တင်း ခဲ့ကြသည်။ ရေဆာလာပါက ရေ
သန့်ဗူးဖြင့် တစ်ဖုံ ၊ မောဟိုက်လာပါက အားဖြည့် အချိုရည်ဖြင့် တစ်သွယ် ဆာ လောင်
လာပါ ကအစားကောင်းတို့ ဖြင့်တစ်နည်း ချက်ခြင်း ဆိုသ လို့ မိမိတို့ တောင်း တသော
စိတ်အာသီသ ခန္ဓာကိုယ် အာသီသတို့ကို ပြည့်အောင် ဖြည့် တင်း ခဲ့ကြ သည်။ သို့ သော်
ဆွီယာမ် စောင့်ထိန်းစဉ်အတွင် ၄င်း ဆန္ဒတို့ကို ဆိုင်းငံ့စောင့်ဆိုင်း ထားနေခြင်း
က အလွန် ရတောင့် ရခဲသော အရည်အချင်း တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဆွီယာမ်ဥပုသ်
ကနေ ခန္တီး တရား တန်ဖိုး နှင့် ၄င်း၏ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများကှို နားလည်
သိရှိစေပါသည်။ စိတ္တဗေဒ ရှုထောင့် အရ ဆိုလျှင် ရုပ် ၀တ္ထုများ ပြည့်လျှံနေသော
၊အတောမသတ်သော ဆန္ဒ များကို မွေးဖွား ပေးနေသော ကမ္ဘာကြီး နှင့် ဝေးရာသို့
အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရှောင်ခွာ လာနိုင်ခြင်း ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထု အသပြာ
များ နှင့် သွန်းလောင်း ထားသော ခေတ်သစ် လူနေမှုစတိုင် အပေါ် ရမက်ထား လိုစိတ်ကို
ဤအလွှာ က ချိုးနှိမ်ပစ်ပါသည်။ လူတို့၏ စိတ်ကို အားအင်ခွန်းအား များ ပေးစွမ်း
သော အစား အ သောက် တို့ကို ဆွီယာမ်ဥပုသ် အတွင်း ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်းက မိမိတို့၏
စွမ်းဆောင်ရည် များ အပေါ် အစား အသောက် များ က လွှမ်းမိုး နေသည် ဟူသော
ထင်မြင်နေစိတ်ကို လျှော့ချ နိုင်ပါ သည်။
*နာမ် ၀ိညာဉ် အလွှာ*
ဆွီယာမ်၏ အမြင့်ဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သော သက္က၀ါ ခေါ် အလ္လဟ် အရှင်မြတ် အား
သိစိတ်ဖြင့် ချစ်ကြောက်ခြင်းကို ဤအလွှာက ဖေါ်ကျူး ပါသည်။ ဆွီယာမ် ရည်စူးချက်
နေ့စဉ် ဆွီယာမ်မ စောင့် တည်မှီ မိမိရည်စူးချက်ကို အဖန်ဖန်တလဲလဲ ပြုလုပ်ရန်
လိုအပ်ပါသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး က ဖဂျရ် မတိုင်ခင် ဆွီယာမ် စောင့်တည်ရန်
မရည်စူးခဲ့သော မည်သူမဆို ဆွီယာမ်ရရှိလိမ့် မည်မဟုတ် ( အဗူဒါဝူးဒ်ကျမ်း)၂
နေ့စဉ် မိမိ၏ရည်စူးချက်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည် ဆွီယာမ်ဥပုသ်သီလ၏
ရှင်းသန့်သော နာမ်ပိုင်း ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စစ်မှန်သော အုတ်မြစ်ချနိုင်
ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြစားမှုမပါ ဟန်ဆောင် မှု ကင်းသော ဆွီယာမ်ဥပုသ်ကို အလ္လဟ်
အရှင်မြတ် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စောင့်ထိန်းမည် ဆို လျှင် အတိတ် က ကျူးလွန်ခဲ့
သောအပြစ် ဂိုနဟ်များကို အလ္လဟ်အရှင်မြတ်က ခွင့်လွတ်ပေလိမ့်မည်။ အလ္လဟ် အရှင်မြတ်
နှင့်နီးရာသို့ ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး က ရမသွာန်လမြတ် ရောက်လာ
သည့် အခါတိုင်း ကောင်းကင် ဂျန္နသ်ဥယျာဉ် ၏ တံခါးပေါက်များ ပွင့်နေကြောင်း
မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ (ဗူခါရီကျမ်း) ၂
ဆွီယာမ်သည် လူသားနှင့် အလ္လဟ်အရှင်မြတ်အကြားက သီးသန့် အိဗာဒဟ် ဖြစ်သည်။
သီးသန့်ဖြစ် သော ဆွီယာမ်ဥပုသ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလ္လဟ်အရှင်မြတ် က ဤသို့
မိန့်ကြားထားပါသည်။ ဆွီယာမ် ဥပုသ် စောင့်ထိန်းခြင်းမှ အပ အာဒမ်၏ သားမြေးများ၏
ပြုမူဆောက်တည်မှုတိုင်း သည် ၄င်းတို့ အ တွက် သာလျှင်ဖြစ် သည်။ ဆွီယာမ်သည်
ငါအလ္လဟ်အရှင်မြတ် အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး ငါအ ရှင် ကိုယ် တော် တိုင် ဆွီယာမ်အတွက်
ချီးမြင့်တော်မူမည် (မုစ်စလင်ကျမ်း)၂ ဟု မိန့်ကြား တော်မူခဲ့ သည်။
မြတ်ဆွီယာမ်အား ရမသွာန် လ ၁ရက် ၂ရက် ရက် ၃၀ စသည် ဖြင့် မိမိတို့ က တိုင်းတာ
သတ်မှတ် ကြပါသည် ။ သို့သော်လည်း ဆွီယာမ် ၏ ပေးသော သက္က၀ါ ဖြစ်ထွန်းမှု ကိုတော့
ရမသွာန် တစ်လ တည်းဖြင့် မတိုင်းတာ နိုင်ပါချေ။ တစ်နှစ် တာ အတွင်း ပြုမူ
ကျင့်သုံးသော မိမိတို့၏ နေမှုဟန် ကို ထောက်ရှုခြင်း ဖြင့် သာ ဆွီယာမ်ကပေးသော
သက္က၀ါဖြစ်ထွန်းမှုကို တိုင်းတာ သတ်မှတ်နိုင် ပါလိမ့် မည်။
အဆောက်အအုံတစ်ခု တွင် အုတ်မြစ် အမိုး အကာ အခင်း နည်းပညာ တို့က မရှိမဖြစ်
သည့်နည်းတူ ဆွီယာမ်တွင်လည်း အထက်ပါ အလွှာ ၆လွှာ သည် မရှိမဖြစ် အရေးကြီး လှပါသည်။
ခိုင်မြဲ သော ၊ တောင်းတင်းသော အဆောက်အုံတစ်ခု ဖြစ်လာ ရေးတွင် အုတ်မြစ်၊ အမိုး
အကာ အခင်း ၊ဆောက် လုပ် သည့် နည်းပညာ တို့ကို စနစ်တကျ အသုံးချရန် အရေးပါသကဲ့သို့
ထုံးတမ်း စည်းမျဉ်း အ လွှာ၊ ရုပ်ကာယ အလွှာ ၊စိတ်ခံစားချက် အလွှာ၊ စိတ္တ အလွှာ
၊နာမ်ဝိညာဉ် အလွှာ အသီးသီး တို့က ဖေါ် ကျုး နေသော အနှစ်သာရများ ကို နှားလည်
ကျင့်သုံး မှသာ မိမိတို့စောင့် ထိန်း သော ဆွီယာမ် ဥပုသ် သည် အလ္လဟ် အရှင်မြတ်
ကိုယ်တော်တိုင် ချီးမြင့်မည့် ဆွီယာမ်၊ သက္က၀ါဖြစ်ထွန်းသော ဆွီယာမ် ဖြစ်လာ
ပါမည်။ ထိုဆွီယာမ်က ပင် ရမသွာန်တည်းဟူသော လတစ်လကို လွန်မြောက်ကာ တစ်နှစ်တာ
၊တစ်သတ် တာ ရှိ မိမိတို့၏ ဘ၀နေဟန်ကို အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲ စေမည်ဖြစ် ပါ
၂။အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ဟဒီဆ်း များ (ဆော့ဖ်ဝဲ)
၃။Toword Understanding Islam by Maududi
၄။Why do Muslim Fast by Bhilal Phlip
တင်ပြရေးသားသူ မုဟမ္မဒ် စအီးဒ် (ဒအ်ဝဟ်အကယ်ဒမီ-ပါကစ္စတန်)
ပို့စ်တင်သူ IYS ဝိုင်းတော်သား Ko Thek Ko အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 1:57 PM No comments:
၁- စဲဟ်ရီ အချိန်ရွတ်ဖတ်နေရမည့်ဒုအာ
“ ယာ ၀ါစေအလ်မဂ်ဖွေရသ်”
၂-အစွရ်အချိန်မှ မဂ်ရစ်ဗ်အချိန်ထိ ရွတ်ဖတ်နေရမည့်ဒုအာ
“ယာ ၀ါစေအလ် ဖဒ်ွလေ အစ်ဂ်ဖစ်ရ်လီ”
၃-ရိုဇဟ် ပထမနေ့မှ ဆယ်ရက်မြောက်နေ့ အထိ ရွတ်ဖတ်နေရမည့်ဒုအာ
“အလ္လာဟွမ်မရ်ဟမ်နီ ယာအရ်ဟမရ် ရာဟေမီန်း”
၄-ရိုဇဟ် တစ်ဆယ့်တစ်ရက်နေ့မှ နှစ်ဆယ်ရက်မြောက်နေ့ အထိ ရွတ်ဖတ်နေရမည့်ဒုအာ
“ အလ္လာဟွမ် မဂ်ဖစ်ရ်လီ ဇူနူဘီ ယာရဗ္ဗလ် အာလမီးန်”
၅-ရိုဇဟ် နှစ်ဆယ့်တစ်ရက်နေ့မှ နောက်ဆုံးနေ့ အထိ ရွတ်ဖတ်နေရမည့်ဒုအာ
“ အလ္လာဟွမ္မ အသ်ကေနီ မိနန်နာရိ ၀အဒ်ခိလ်နီ ဖိလ်ဂျန္နသီ ယာရဗ္ဗလ် အာလမီးန်”
၆-ကဒရ်ညမြတ်ဖြစ်နိုင်သော ရိုဇဟ် ၂၁-၂၃-၂၅-၂၇ နှင့် ၂၉ ရက်များတွင် နေ့ ည
“ အလ္လာဟွမ္မ အင်နက အဖုဝ်၀ွန်း သုဟစ်ဗ်ဗွလ် အဖ်ဝ ဖာအ်ဖုအန်းနီ ယာဂဖူးရူ
၇-လမြတ်ရမဇွာန်တွင် သွားရင်းလာရင်း အချိန်တိုင်း အကြိမ်ကြိမ်
“ လာအိလာဟ အစ်လ္လလ္လာဟု နပ်စ်သဂ်ဖိရွလ္လာဟ ၀နပ်စ်အလုကလ်ဂျန္နသ ၀နအူဇုဗိက မိနန္နာရိ”
ပို့စ်မျှဝေသူ sister Jasmine Shafee အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 1:14 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 8:38 PM No comments: